Uma ufuna uthole isesimweni, udinga nje ukusebenzisa noma yini njenge-ejenti silinganiso ukuthola indlela kukhuphula lizinga inhliziyo futhi wenze uqeqesha ibhalansi yakho, kanye into eyosisiza elula. Uma ucabanga ukuqeqeshwa kungenzeka kuphela ikamelo ekhethekile, uku okungalungile.
Ungase wenze kahle ejimini enkulu khona kanye ekhaya, futhi awudingi ukuthatha ikamelo ngaphansi treadmill! Ngaphandle kwemizamo eminingi nemali enkulu kungenzeka ukufeza impilakahle, waphenduka indlu ibe ejimini ngaphandle nemishini ekhethekile. Uzodinga lezi amathiphu ambalwa alula!
Thenga izitsha alahlwayo
Okokuqala, kudingeka ukuqeqesha umzimba wakho! isisindo sakho kwanele ukuzijayeza, ngisho noma nesisindo impela kancane. Exercises nge isisindo siqu - indlela enhle kakhulu uthole isesimweni, kodwa ungakwazi abeke phambi kwakhe futhi umsebenzi onzima kakhulu - ukusebenzisa amapuleti alahlwayo agxumele! Vele ubeke ngonyawo olulodwa phezu plate ezifana lunges nasemlenzeni glide ngaphesheya phansi lapho ihamba. Uma ungenalo nje ushiya, futhi agxumele, oyisebenzisayo imisipha, ukunwebeka kwemisipha nabancane, adingekayo ukuze unganyakazi. Wena ukuqeqesha nzima ukulawula ukunyakaza kwabo. Ungabeka izandla zakho on isidlo uma wenza push-ups, noma kokubili izinyawo - kukhona umzimba eziningi singafakwa ingashintshwa ukuze le nqubo. Into esemqoka - qaphela. Uma ungaqiniseki ukuthi uzokwazi ukulawula imisipha yabo, kungcono ukuqala umsebenzi elula.
Yenza Sisindvo amabhodlela amanzi
Amanzi - indlela ephelele ukuze udale silinganiso. Ungasebenzisa amabhodlela amanzi epulasitiki njengoba dumbbells. Khetha ubukhulu ilungelo ngokuvumelana namakhono abo, ngesikhathi sizokwazi ukwandisa umthwalo. Uma wenze ukuqeqeshwa amandla njengoba amabhodlela njalo ngakwesokunene, futhi ungakwazi zifezeke ngaphandle kwezinkinga. Ungasebenzisa lawa izinsimbi for yimuphi umsebenzi. An ibhonasi eyengeziwe - amanzi wachela. Kungase kubonakale ukuthi Nokho, trifle, ukuhamba njalo zamanzi ngebhodlelweni ihlinzeka zabacindezela kakhulu imisipha udinga ukulawula ukunyakaza zakho. Konke lokhu kwenza kube okunye okukhulu amabhodlela epulasitiki simulators - abayikho ezishibhile, elula futhi ewusizo ngempela ukuqeqeshwa functional.
Izincwajana zemininingwane ekhishini
Ekhishini, eziningi izihlalo kanye nomsebenzi evele ukuthi angasetshenziswa ukwakha ejimini. Uma wenza kanjalo zonke ukupheka, ukuhlanza indlu usuku, zama ezokhipha amasethi amaningi parallel umzimba phezu amandla. Qala ngokusebenzisa izihlalo ekhishini ukusebenzisa ingxenye engezansi yomzimba, isibonelo, i-squats noma ukweqa. I nale- kungenziwa ngosizo ebhentshini ngaphandle emuva. Abantu bakholelwa izinto ezihlukahlukene umthwalo phezu imilenze phezu cindezela, okuyizinto ephelele. Qedela umthwalo imvaba ngamanzi, ukuze umphumela kwaba kubi nakakhulu. Ungasebenzisa ebusweni umsebenzi ekhishini ngoba izivivinyo ezifana push-ups. Vele usebenzise sonke isikhathi khulula ukuzijayeza, futhi umphumela ngeke bathathe isikhathi eside.
Thola ukulinganisela ekamelweni
Ngokuqinisekile akhuluma njengoba nje ingane, ukuthi akufanele gxuma phezu kombhede. Kodwa ngangifuna ngena ngoba kumatilasi nokunwebeka nokulinganisela ku akulula, akunjalo? Lokhu yikho okwenza inqubo ezithakazelisayo ngakho! Esikhundleni ukuthenga ibhola esikhethekile ibhalansi, sebenzisa embhedeni njengendawo ukuqeqeshwa kwabantu kusengozini. Yiqiniso, kulesi simo uzodinga ukuhlanza izingubo, ikakhulukazi amasokisi. Awufuni hit amagciwane behlele imicamelo? Hlale ukhumbula lokhu lapho unquma ukwenza ukuhlaselwa ngqo kumatilasi. Kuhambisana kahle umbhede nakalula umzimba, isibonelo, ukwenza iqoqo-yoga.
Kungenzeka ukuthi usunawo ekhaya ubhaka lokho elinde nje, uma uqala ukuyisebenzisa. Gcwalisa izincwadi zakhe, okusemathinini noma amabhodlela wagcwala amanzi, futhi ke wagqoka. Futhi manje wena umane wenze izinto! Cupha iwashi ukuba likhale isigamu sehora niphume, Sula uthuli, wahlanganyela egeza. Zonke lezi zinto ngeke kubonakale othethelelayo ingasaphathwa uma nizenza nojosaka esindayo. Uma zigcwele amandla, ungazama ukwenza push-ups noma-sit-ups. Ungasebenzisa ubhaka njenge-ejenti silinganiso. I nemikhawuko kuphela ukuzilolonga kuphela amehlo akho engqondo. Inzuzo eyengeziwe ye ubhaka ukuthi kukusiza ukulawula ukuma yakho.
Uma ikhaya lakho has izitebhisi, lapho okungenani izinyathelo ezimbalwa, ungakwazi ngenkuthalo ukuyisebenzisa. Lokhu yisihumusho se-cardio kakhulu futhi elula, okuyiwona udinga kuphela ukuhamba noma ukusebenzisa izitebhisi. Khuphuka ngesinyathelo esisodwa, ukuhamba emaceleni noma emuva. Izinyathelo ingasetshenziswa ngezindlela eziningi, bonke ngothi lwabo kuzokusiza uthole endaweni isesimeni esihle. Sebenzisa izitebhisi nsuku zonke okungenani imizuzu embalwa futhi zingabonisi ngalé yakho zizongena futhi ekhangayo.
Uma une ukuqeqeshwa abanye ngobuqotho, udinga okungenani elula kakhulu. Akukho lutho olubi ngalokho, ukusizakala-gravity kanye nokuphenyisisa izandla zabo ukwenza isikhundla lusetshenziswa ngilulekela. Noma kunjalo, tape ekhethekile eyenza ngokuyisimangaliso ngilulekela ngempumelelo kakhulu. Uma i-tape enjalo ungaphenduki, ngeke asondele ithawula. Iwusizo cishe noma yimuphi usayizi! Vele ukugoqa imilenze ithawula uma wenza elula ngoba umzimba engezansi, bese ubamba onqenqemeni ezandleni zakhe. Donsa ithawula, kodwa musa nzima umzimba wakho yokwelula ngaphezulu. Uma uzizwa ukungezwani emzimbeni elingaphezulu, ithawula kuzokusiza yokwelula izicubu izingalo nasesifubeni. Lena indlela elula, okuyinto isebenza kakhulu ngempumelelo. Uma ufuna ukusebenza Ukuzivumelanisa nezimo zakho, ithawula evumelana nawe!
Unikezele ngezinsizakalo ubuhlungu
Into kuphela ukuthi kungadingeka ngemva elula omuhle - lena massage okukhulu. Esikhundleni ukuthenga isiqeshana okhethekile, thatha ekhishini rolling pin bese Roll it on the imilenze ukuqeda ukucindezeleka kuzo. Vele ugcine pin rolling isibambo bese ukuhambisa up and down imilenze, izicubu izinkomba ilungiselelo. Misa ezindaweni lapho ukucindezeleka kubonakala kakhulu. Hambisa kancane futhi ngomoya ophansi, ukuzama ukwenza eziyishumi noma ezingamashumi amabili ukunyakaza ku iqembu umsipha ngamunye. Lena yindlela elula futhi hhayi eqolo ukwenza ngaphandle ividiyo futhi sifinyelele umphumela ofanayo ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Sebenzisa amehlo akho engqondo bese uqale ukuhambisa
Empeleni, kungakhathaliseki ukuthi ukuphi baqeqesha nalokho imishini ukusebenzisa le njongo. Konke Okusemqoka ukuthi ukunikeza isikhathi empilweni yakho bese uyazama ukuba matasa. Vele uvule umculo owuthandayo, ukusetha isibali futhi unamathisele yonke imizamo yabo. Ungakwazi ukusebenzisa endlini, ukwenza push-ups phezu umsebenzi ekhishini, kuzuba izitebhisi noma dancing nezingane - konke lokhu kuzuzisa. Ungazivumeli ukuba ukuzilandulela ngazwi linye nje ngoba awunayo ikhadi ubulungu ejimini. Uma ufuna ngempela ukuthuthukisa imfanelo yakho, ungathola amathuba e zonke mzuzu zansuku zonke. Umphumela uqinisekile ukuvela, nawe nje kudingeka sibonise isineke kancane nokukhuthazela - uzobese evuzwa ngomzimba omuhle komthetho.
Ukuqeqeshwa yezandla: umzimba yekwentiwa
Pushups Proper: Imishini, ukuphefumula
Kanjani ukwakha ekhaya. Isifundo imisipha ngabanye
Zumba - Kuyini? Zumba Ukufaneleka: Izibuyekezo
Yenza imilenze enhle futhi mncane
Ukuqina ABL. Kuyini lokhu? Izici
Izimfihlakalo Literary: isidlaliso Gogol
Njengoba kule "Contact Us" ukufunda ingxoxo yabanye abantu? Kanjani ukufunda emaposini wabanye e "VKontakte"?
Womlingisi umqondisi Bykov Yury: Biography futhi umsebenzi
Yini okufanele ibe amahanisi isihlibhi ngoba Husky?
Ikhompyutha umdlalo Dark Souls: Hyde, wedlula
Ngangifisa ukuthi ngikhulelwe - yini ke? Dream Ukuhunyushwa: Ukukhulelwa. Ukuphupha ayakhulelwa
Amaphethini Celtic: inshokutsi kufanekisa